Brisbane • Fanosorana vatana sy fanorana NuRu
Fandriho ny tsara indrindra amin'ny fivoriana fikosehana vatana tsara indrindra any Brisbane, Aostralia. Nuru Massage na Happy Ending Massage ihany koa ireo safidy.
Brisbane (anaram-bosotra Brissie eo an-toerana) no renivohitra misy seranan-tsambo ary tanàna lehibe indrindra any Queensland any Aostralia. Manana mponina 2.2 tapitrisa izy ary tanàna lehibe fahatelo eto Aostralia aorian'ny Sydney sy Melbourne.
Ny tanàna afovoany dia eo amin'ny Reniranon'i Brisbane, 23 kilometatra (14 mi) mankany afovoan'i Moreton Bay.
Brisbane dia nomena anarana taorian'ny reniranon'i Brisbane, izay nantsoina tamin'i Sir Thomas Brisbane izay Governoran'i New South Wales nanomboka tamin'ny 1821 ka hatramin'ny 1825.
Sandam-bola TO dolara
Fotoana tsara indrindra hitsidihana Martsa - Mey